नेपाल भर्सेस भारतः भारत १६१ रनमै समेटियो ! [अपडेट] - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल भर्सेस भारतः भारत १६१ रनमै समेटियो ! [अपडेट]
काठमाडौं, भदौ २७ । भारतको लखनउमा सुरु भएको चौकोणिय एकदिवसीय सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा भारत यु-१९ ‘बि’ सँग खेलीरहेको नेपालले टस जितेर उत्कृष्ट बलिङ गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपः नेपालसँग भारत २–० ले हार्‍यो
१६२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले खराब प्रदर्शन गरेको छ । नेपालले १५ ओभरमा महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाउँदै २७ रन मात्र बनाएको छ ।
ट्याग्स: nepal vs india, Nepali U-19 Cricket team